Madaxweyne K/xigeenka Puntland oo Xariga Ka Jaray Xarunta Jowle Furniture Mall Oo Garoowe Laga Furay [SAWIRO] | SAHAN ONLINE
Madaxweyne K/xigeenka Puntland oo Xariga Ka Jaray Xarunta Jowle Furniture Mall Oo Garoowe Laga Furay [SAWIRO]
GAROOWE;-Madaxweyne K/xigeenka dowlada Puntland C/xakiim Xaaji Cumar Camay ayaa xariga ka jaray xarunta ugu weyn soomaaliya ee lagu iibiyo qalabka guryaha iyo xafiisyadda ee Jowle Furniture Mall, oo laga hirgaliyay Caasimadda Puntland ee Garoowe.
Shirkadan ganacsi oo uu furtay ganacsade Axmed Jaamac Jowle oo ka mid ah ganacsatada Puntland ayaa ah xarun weyn oo u gaar ah noocyadii u dambeeyay ee qalabka xafiisyada adduunka laga isticmaalo iyo qalabka kale duwan ee guryaha loo adeegsado.
Munaasabada oo lagu daahfuray xaruntaan, waxaa ka soo qaybgalay madaxweyne Kuxigeenka Puntland, Wasiir k/xigeenadda Wasaaradda maaliyada, gudoomiyaha gobolka Nugaal, Islaam Ciise Islaam Maxamed, masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda, Ganacsato iyo qaybgaha kale ee Bulshadda.
Ganacsade Axmed Jaamac Jowle oo faahfaahin ka bixiyay sababta ku kaliftay inuu Garowe ka furmo xaruntan weyn oo noocan oo kale ah, wuxuu sheegay kadib markuu uu arkay isbedelka xowliga ku socda ee ka jira Puntland iyo baahida loo qabo in la helo qalabka guryaha iyo xafiisyadda oo casri ah uu go’aansaday inuu maalgaliyo xarunta ugu weyn dalkeena oo uu ka furay Garoowe.
“ Qalabkan kala duwan ee aan xarunta yaal, badan kooda waxaa ka keenaa Dalaka Turkiga iyo Shiinaha, tayadoodu aad bay u saraysaa, waana noocyadii u dambeeyay ee hadda adduunka laga isticmaalo” ayuu yiri Axmed Jowle
Wuxuu ugu bishaareeyay shacabka in bilaha ugu horeeya ay qiimo jaban ku iibin doonaan qalabkan oo uu sheegay inay dadku awal hore dalka dibadiisa ka dalban jireen iyagoo beli ay ku baxayso karash aad u badan.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faroweyne ayaa ku ammaanay ganacsade axmed jowle xaruntan cusub ee uu ka furay caasimadda oo uu sheegay in qayb weyn ka qaadanayso horumarka caasimada iyo guud ahaan Puntland, isagoo xusay inay soo dhaweynayaan ganacsatada iyo shakhsiyaad kale ee daneenaya inay maalgashtaan caasimadda.
Intii ay socotay Munaasabadda Furitaanka xarunta iibka qalabka guryaha iyo xafiisyada ee Jowle furniture, waxaa kaloo ka hadlay Wasiir K/xigeenka Maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax iyo Guddoomiyaha haweenka Puntland Khadro Warsame waxayna bogaadiyeen ganacsade Axmed Jowle iyo howsha muuqata ee uu bulshadda u hayo.
Islaan Ciise Islaan Maxamed oo munaasabada ka jeediya hadalo isugu jiray dardaaran, baraarujin iyo duco ayaa ganacsade Axmed Jowle ugu duceeyay in ilaahay u barakeeyo hantidiisa iyo xarunta cusub ee uu furay.
Madaxweyne K/xigeenka dowladda Puntland C/xakiim Xaaji Cumar oo soo gabagabeeyay xafladda ayaa ugu hambalyeeyay Ganacsadaha xarunta cusub ee uu ka hirgaliyay caasimadda, isagoo qiray inay tahay xarunta ugu weyn iyo uguna casrisanayd ee uu xariga ka jaro mudadii uu Puntland joogay.
“ Waa markii saddexaad oo aan xariga ka jaro xarun ganacsi oo u leeyahay Axmed Jowle, waxayna tilmaamaysaa sida uu ugu bisl yahay ganacsiga iyo maalgashiga dalkiisa hooyo, waan hubaa inay xaruntan tahay mid casri ah marka loo eego tayada qalabka la keenay” ayuu yiri Madaxweyne K/xigeenka.
Gabagabadii, Madaxweyne K/xigeenka dowladda Puntland wuxuu shahaado sharaf guddoonsiiyay Shirkadda Daa’uus oo si qurux badan u naqashadaysan Xarunta ganacsiga ee Jowle Furniture, waxaana shahaado bixisay Shirkadda Jowle.